हामीले किन विद्रोह गर्‍यौं त्यसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, चितवनको तमासा नै पर्याप्त छ : अध्यक्ष नेपाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले विद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनको तमासा र चितवनको कुम्भमेला नै पर्याप्त रहेको बताएका छन् । उनले नेकपा एमाले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरुको अपमान भइरहेको भन्दै नेकपा एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँकिएको बताए । नेकपा एमालेले कुनै पनि जनवादी अधिकारहरु प्रदान नगर्ने, विचारको बहसहरु सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिले नै नेकपा एमाले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट पारेको भन्दै अध्यक्ष नेपाललेएमाले अधोगतितर्फ गइसकेको पनि दाबी गरे ।
अध्यक्ष नेपालले भने, ‘अहिले हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेका छौँ । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्‍यौँ । किन विद्रोह गर्‍यौं त्यसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, चितवनको तमासा नै पर्याप्त छ । त्यहाँको कुम्भ मेला नै पर्याप्त छ, त्यहाँ फरक मत राख्ने व्यक्तिहरुमाथि जसरी अपमान भएको हामीले समाचार पाइराखेका छौँ । त्यो नै पर्याप्त छ । जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकारहरु प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरु सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने, त्यो प्रवृत्तिले नै प्रष्ट पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न सक्दैन, त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ ।’
अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेलाई विदेशीको दलालीले मात्र प्रशंसा गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले महाधिवेशन उद्घाटनमा एमालेको उच्च प्रशंसा गर्नु स्वभनीय नभएको बताए । उनले राम्रो विचारधाराको पार्टीले राम्रोकै साथ दिने र नराम्रो विचारधाराको पार्टीले नराम्रोको नै साथ दिने भन्दै एमालेको कामले पार्टी कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिने बताए । उनले अहिले वामपन्थी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर ५ दलीय गठबन्धन सरकार बनाएको र मुलुक र संविधान मास्नेहरुबाट मुक्ति दिलाएको बताए ।
अध्यक्ष नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले उच्च प्रशंसा गरेको, विदेशीहरुको दलाली गर्नेहरुले उच्च प्रशंसा गरेको, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दै छ । राम्रोले राम्रोलाई प्रशंसा गर्दा रहेछन्, नराम्राले नराम्रालाई नै प्रशंसा गर्दछन् । त्यसैले राम्रा राम्रसँग, नराम्रा नराम्रासँग छन्, अहिले हामी वामपन्थी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकताबद्ध भएर ५ दलीय गठबन्धन बनाएका छौं । यो मुलुकलाई, संविधानलाई क्षतविक्षत पार्न खोज्ने शक्तिबाट मुक्त गरेका छौँ । लोकतन्त्रलाई मास्न खोज्ने शक्तिहरुबाट जोगाएका छौं । संविधानको, लोकतन्त्रको रक्षा गरेर हामीले क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको जगेर्ना गरेका छौँ । हामी क्रान्तिप्रति, त्यसबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरुप्रति अत्यन्त सजग छौँ । गम्भीर छौँ, रक्षा गर्न चाहन्छौँ । अगाडि लान चाहन्छौँ, प्रगतिको दिशामा बढाउन चाहन्छौँ ।’
क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको जगेर्ना गर्न र क्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुप्रति आफू र आफ्नो पार्टी अत्यन्त सजग भएको बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १८:०७
मंसिर १३, २०७८ कुशल तिमल्सिना
काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिवमा नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टंकलाल घिसिङ नियुक्त भएका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन प्रतिस्पर्धीमध्येबाट घिसिङलाई राखेपको १९ औं सदस्यसचिवका रुपमा नियुक्त गरेको हो ।
खेलकुद विज्ञद्वय डा. अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठलाई पछि पार्दै माओवादी केन्द्र निकट घिसिङले राखेपको कार्यकारीमा चार वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएका हुन् । सम्भवत: मंगलबार उनले शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।
कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेयता राखेपको कार्यकारी पद रिक्त थियो । करिब डेढ महिनापछि राखेपले नयाँ कार्यकारी पाएको हो ।
डा. दामोदर रेग्मी सचिवका रुपमा आएपछि मंसिर ३ गते दर्खास्त आह्वान गरिएकोमा मंसिर १० गतेको समयसिमासम्म १८ जनाले आवेदन दिएका थिए । सचिव रेग्मी तथा विज्ञ सदस्यद्वय कमला ज्ञवाली र हरिबहादुर श्रेष्ठ सम्मिलित छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १७:५४